IKEA kuvhura ipamba inoenderana neKeKit pamutengo wekugogodza | IPhone nhau
IKEA yakazunza maoko Apple uye HomeKit Yange iri nguva yakareba kubvira pakagadzirwa chigadzirwa cheTradfri (usatambise nguva kuyedza kuyedza hunyanzvi hwako hweSweden) yatove nemagetsi emagetsi nemabuttut kwese kwese, kubatana kuri kubatsira zvese zvakaenzana, pasina kupokana.
Iye zvino IKEA's Tradfri ine HomeKit renji iri kukura nekupa smart plug pamutengo wekugogodza. Smart plugs inoenderana neKeKKit haina kunyatso kudhura, zvirinani dzimwe nzira dzave pamusika, chimwe chinhu chinozochinja munguva pfupi iri kutevera.
Webhusaiti yenhau yeSweden inonzi tekinoroji vhiki anga ari iye akavhura tsuro nezve ichi chigadzirwa chitsva chekambani inozivikanwa kwazvo yemidziyo.
Pulagi inozoverengerwa muhuwandu hwezvinhu zvakangwara zvinonzi TRADFRI uye inodhura madhora gumi (€ zvakare zvinofungidzirwa). Kana iwe uchida bhatani reOn / Off mune zvakafanana mutengo unenge uri madhora gumi nemashanu. Bhatani iri remagineti system raunogona kuisa munzvimbo ipi neipi yesimbi uye unenge uine chiito chakakura cheanosvika gumi metres.
Iyo bhatani system kune iyo nhau inoreva yakafanana chaizvo neiyo iyo yatinowana, semuenzaniso, mune akangwara mwenje we IKEA, iyo inosanganisira magnetized keypads.
Isu tinoona kuti chigadzirwa ichi chinodhura zvakadhura pane icho chinopihwa nemakwenzi anokwikwidza akadai saElgato kana Koogeek pachayo, avo "vanotimanikidza" kushandisa makumi matatu emauros kana tichida kuve neiyi yakanaka HomeKit-inoenderana plug. Chimwe chinhu chinondiudza kuti aya masoketi eKEA ane HomeKit ari kuzotengesa chaizvo, kunyanya nekuti iri nyore uye yakasununguka nzira yekuronga zvimwe zvinhu zvakaita seanopisa moto kana hita yemagetsi. Uyekana kuti handingazvirambe, mumba mangu muchave mune akati wandei aya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » IKEA kuvhura HomeKit-inoenderana plug in kugogodza-pasi mutengo